श्रृंखला खतिवडा “मिस वर्ल्ड” को भोटिङमा सबैभन्दा अगाडी , यसरी गर्नुहोस् भोट ! - जिस्ट खबर अर्थात यथार्थ खबर
श्रृंखला खतिवडा “मिस वर्ल्ड” को भोटिङमा सबैभन्दा अगाडी , यसरी गर्नुहोस् भोट !
“मिस वर्ल्ड” खतिवडा यतिबेला सबै नेपालीहरुको आसाको केन्द्रबिन्दु बनिरहेकीछिन् । उनी यतिबेला “मिस वर्ल्ड २०१८” को प्रतिस्पर्धाका लागि चीनमा रहेकीछिन् । त्यसमाथि पनि शृङ्खला मिस वर्ल्डको यात्रामा विश्वभरीका सुन्दरी प्रतियोगिताका प्रेडिक्टरहरुले नेपाललाई पहिलो पटक टप १० , ५ हुँदै टप ३ भित्र राखेका छन् ।
जुन शृङ्खलालाई मिस वर्ल्डको उपाधीका लागि सहज बनाउँन सक्छ ।किनकी यसअघि नेपालका कुनै पनि सुन्दरीहरु प्रेडिक्टरहरुको नजरमा परेका थिएनन् । यही कारण पनि यतिबेला श्रृङखलाको चर्चा थप चुलिएको छ । यसपटक श्रृंखलालाई कडा प्रतिस्पर्धीको रुपमा उभाइएको छ । त्यतीमात्र होईन उनी भोटिङमा पनि सबैभन्दा अगाडी रहेकीछिन् ।
श्रृंखला माइ भोटिङ गर्न का लागि निम्न बिधी अपनाउन सकिन्छ –
१)मोब्स्टर (MOBSTAR) नामक एप डाउनलोड गर्ने
२)कुनै पनि समाजिक सन्जाल एकाउन्ट बाट लग इन गर्ने
३)अङ्रेजिमा श्रृंखला खतिवडा ( SHRINKHALA KHATIWADA) सर्च गर्ने
४) त्यहाँ फलो बटन हुन्छ त्यो थिच्ने
५) देब्रे देखी दाहिने सम्म दबाउने
६) सही किसिम को कमेन्ट गर्ने ( कमेन्ट पनि भोटमा गणना हुन्छ )
७) जती सक्दो सेयर गर्ने